ကြွေလွင့် သွားတဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေ ကို ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြုရင်း FLOWER STRIKE လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထား – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကြွေလွင့် သွားတဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေ ကို ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြုရင်း FLOWER STRIKE လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
ကြွေလွင့် သွားတဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေ ကို ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြုရင်း FLOWER STRIKE လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား ကတော့ ခုလက်ရှိ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူထဲကပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ရရာနေရာကနေ တတ်နိုင်သလောက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို လိုအပ်တာတွေကိုလည်း လှူဒါန်းပေး လျက်ရှိတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အချိန်အားဖြင့် နှစ်လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဒီလူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးကတော့ အသက်ပေးသွားကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေလည်း တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်တိုးနေခဲ့သလို ခုဆိုရင် ကလေးငယ်လေးတွေပါ ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူအားလုံးက နှမျောတသ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲနော်။ ပြည်သူအားလုံး ကလည်း နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေး သွားရှာတဲ့ အာဇာနည်လေးတွေ ကို ဆုတောင်းပေးခြင်းတွေ အဆက်မပြတ်လုပ်ပေးနေကြသလို အနုပညာရှင်တွေကလည်းကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ရင်းကူညီမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ဧပြီ (၂) ရက်နေ့မှာ ဆိုရင်လည်း အသက်ပေးသွားကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက် နေရာအနှံအပြားရဲ့ လမ်းမတွေမှာပန်းစည်းတွေချပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်းဖော်ပြရင်း ဂုဏ်ပြုပေးကြတဲ့ Flower Strike လှုပ်ရှားမှုလေးကို ပြည်သူအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နော်ဖောကလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပန်းလေးတွေနဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကို ဆုတောင်းဂုဏ်ပြုပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွနဲ့အတူ ” ကျဆုံးပြီးသော ပြည်သူ့ သူရဲကောင်းများကို ဦးညွတ်လျက်!!!အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် “ဆိုတဲ့စာလေးကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်နော်ဖောရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထား ကေတာ့ ခုလက္ရွိ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူထဲကျပည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရရာေနရာကေန တတ္ႏိုင္သေလာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့သလို လိုအပ္တာေတြကိုလည္း လႉဒါန္းေပး လ်က္ရွိတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။
အခ်ိန္အားျဖင့္ ႏွစ္လျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီလူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီးကေတာ့ အသက္ေပးသြားၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြလည္း တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္တိုးေနခဲ့သလို ခုဆိုရင္ ကေလးငယ္ေလးေတြပါ ေႂကြလြင့္ခဲ့ရၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူအားလုံးက ႏွေမ်ာတသ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတာအမွန္ပါပဲေနာ္။ ျပည္သူအားလုံး ကလည္း ႏိုင္ငံအတြက္အသက္ေပး သြားရွာတဲ့ အာဇာနည္ေလးေတြ ကို ဆုေတာင္းေပးျခင္းေတြ အဆက္မျပတ္လုပ္ေပးေနၾကသလို အႏုပညာရွင္ေတြကလည္းက်န္ရစ္သူမိသားစုေတြကိုအားေပးႏွစ္သိမ့္ရင္းကူညီမႈေတြလည္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ဧၿပီ (၂) ရက္ေန႔မွာ ဆိုရင္လည္း အသက္ေပးသြားၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြ အတြက္ ေနရာအႏွံအျပားရဲ႕ လမ္းမေတြမွာပန္းစည္းေတြခ်ၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေဖာ္ျပရင္း ဂုဏ္ျပဳေပးၾကတဲ့ Flower Strike လႈပ္ရွားမႈေလးကို ျပည္သူအားလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ေနာ္ေဖာကလည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈေလးမွာ ပါဝင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပန္းေလးေတြနဲ႔ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေတြကို ဆုေတာင္းဂုဏ္ျပဳေပးေနတဲ့ ပုံေလးတြနဲ႔အတူ ” က်ဆုံးၿပီးေသာ ျပည္သူ႔ သူရဲေကာင္းမ်ားကို ဦးၫြတ္လ်က္!!!အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္ “ဆိုတဲ့စာေလးကိုေဝမွ်ခဲ့ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ေနာ္ေဖာရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post အမေ တစ်ခု၊ သားတစ်ခုဘဝ မှာ တော်လှန် ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ သားလေးကို ဆုံးရှုံး လိုက်ရလို့ ဖြေမဆည်နိုင်စွာ ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ အသက်(၆၇) နှစ်အရွယ် မိခင်တစ်ဦး
Next post အခုလို အချိန်မှာ အပြောင်အပျက် တွေလျော့ပြီး တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန်ဝိုင်းကူကာ စည်းလုံးကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောပြလာတဲ့ G-FATT